လီဗာပူး နောက်ကို လိုက်ရင်း အမှတ်တွေ ပိုလျော့သွားကြတဲ့ ချဲလ်ဆီး နဲ့ မန်စီးတီး ၊ ခြေချော်ပြန်တဲ့ ဘိုင်ယန် တို့ နဲ့ အတူ . . . . . နံနက်ခင်း အားကစား သတင်းများ - SPORTS MYANMAR
လီဗာပူး နောက်ကို လိုက်ရင်း အမှတ်တွေ ပိုလျော့သွားကြတဲ့ ချဲလ်ဆီး နဲ့ မန်စီးတီး ၊ ခြေချော်ပြန်တဲ့ ဘိုင်ယန် တို့ နဲ့ အတူ . . . . . နံနက်ခင်း အားကစား သတင်းများ
ယမန်နေ့ ညက ကစား သွားခဲ့ တဲ့ အင်္ဂလန် ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲစဉ် ( ၁၄ ) မှာ တော့ အဆင့် ၁ နေရာ က လီဗာပူး ဟာ အိမ်ကွင်း မှာ နိုင်ပွဲ ရယူပြီး ပေါ့ပေါ့ ပါးပါး သက်တောင့် သက်သာ နဲ့ ဆက်လက် ဦးဆောင် နေခဲ့ ပါတယ် ။ လီဗာပူး အတွက် နောက်ခံလူ ဗန်ဒိုက် က ၂ ဂိုး စလုံး ကို သွင်းယူ ပေးခဲ့ ပါတယ် ။ လီဗာပူး ဂိုး သမား အဲလစ်ဆွန် ကတော့ ဧရိယာ အပြင် ဘက် မှာ လက်ထိ ခဲ့လို့ အနီကဒ် ထိ ခဲ့ပြီး အဲဗာတန် နဲ့ ပွဲ ကို လွဲချော် ခဲ့ရ ပါတယ် ။
လီဗာပူး နဲ့ ၉ မှတ် အကွာ က မန်စီးတီး ကတော့ အဝေးကွင်း မှာ နယူး ကာဆယ် နဲ့ ၂ ဂိုးစီ သရေ ကျခဲ့ တာ ကြောင့် အမှတ်ကွာဟ မှု ဟာ ၁၁ မှတ် အထိ ဖြစ်သွားခဲ့ ရ ပါတယ် ။ ချဲလ်ဆီး အသင်း ကလည်း အိမ်ကွင်း မှာ ၀က်စ်ဟမ်း ကို ၁ – ၀ နဲ့ ရှုံးနိမ့် ခဲ့တဲ့ အတွက် လီဗာပူး နဲ့ ၁၁ မှတ်ကွာ သွားခဲ့ ရပြီပဲ ဖြစ် ပါတယ် ။
စနေနေ့ ညက ကစားခဲ့တဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ် ရလဒ်များ –
နယူးကာဆယ် ၂ – ၂ မန်စီးတီး
လီဗာပူး ၂ – ၁ ဘရိုက်တန်
ဘန်လေ ၀ – ၂ ပဲလေ့စ်
ချဲလ်ဆီး ၀ – ၁ ၀က်စ်ဟမ်း
တော့တင်ဟမ် ဟော့စပါး ၃ – ၂ ဘုန်းမောက်
ဆောက်သမ်တန် ၂ – ၁ ၀က်ဖိုဒ့်
စပိန် လာလီဂါ မှာတော့ ရီးရဲ မက်ဒရစ် ဟာ အဝေးကွင်း မှာ အာလာဗက်စ် ကို ၂ – ၁ နဲ့ အနိုင် ရပြီး ဘာစီလိုနာ ပွဲ ကစားခင် မှာ အဆင့် ၁ နေရာ ကို တက်လှမ်း သွားခဲ့ ပါတယ် ။ ကျန်ပွဲတွေ မှာတော့ ဆိုဆီဒက် ၊ ဗလင်စီယာ နဲ့ ဘက်တစ် တို့ အနိုင် ရခဲ့ ကြပါတယ် ။
စနေနေ့ ညက စပိန် လာလီဂါ ရလဒ်များ –
အာလာဗက် ၁ – ၂ ရီးရဲမက်ဒရစ်
ရီးရဲ ဆိုဆီဒက် ၄ – ၁ အီဘာ
မာယော့ကာ ၁ – ၂ ရီးရဲ ဘက်တစ်
ဗလင်စီယာ ၂ – ၁ ဗီလာရီးရဲ
စီးရီးအေ ရလဒ်များ –
ဘရက်စီးယား ၀ – ၃ အတ္တလန်တာ
ဂျီနိုအာ ၀ – ၁ တိုရီနို
ဖီအိုရင်တီးနား ၀ – ၁ လက်ချီ
ဘွန်ဒစ်လီဂါ မှာတော့ ယာယီ နည်းပြ ဟန်ဆီ ဖလစ် လက်အောက် မှာ နိုင်ပွဲ ဆက် နေခဲ့တဲ့ ဘိုင်ယန် မြုးနစ် အသင်း ဟာ လေဗာကူဆင် နဲ့ အတွေ့ မှာ တော့ ရပ်တန့် ပြီး ရှုံးနိမ့် သွားခဲ့ ရ ပါတယ် ။ ဒါကြောင့် အဆင့် ၁ ကို ရောက်လာ တဲ့ ရက်ဘူး နဲ့ ၃ မှတ်ကွာ သွားခဲ့ သလို ယနေ့ ည မှာ ကစားမယ့် မိုချန် ဂလာဘတ် သာ အနိုင် ရသွားခဲ့ ပါက အဆင့် ၁ နဲ့ ၄ မှတ် ကွာဟ သွားမှာ ပဲ ဖြစ် ပါတယ် ။
ဘွန်ဒစ်လီဂါ ပွဲစဉ် ရလဒ်များ –
ရှော်ကေး ၂ – ၁ ယူနီယံ ဘာလင်
ဟော့ဖမ်ဟမ်း ၁ – ၁ ဖော်တူနာ
ဟာသာ ဘာလင် ၁ – ၂ ဒေါ့မွန်
ကိုလုံး ၁ – ၁ အော့ဇ်ဘတ်
ပါဒါဘွန်း ၂ – ၃ ရက်ဘူး လိုက်ပ်ဇစ်
ဘိုင်ယန် ၁ – ၂ လေဗာကူဆင်
ယူရို ၂၀၂၀ ပြိုင်ပွဲကြီး ရဲ့ အုပ်စု မဲခွဲမှု တွေ ကို ယမန်နေ့ ညက ပြုလုပ် သွားခဲ့ ပါတယ် ။ ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဇွန်လ ၁ ရက်နေ့ ကနေ စတင် ယှဉ်ပြိုင်မယ့် ပြိုင်ပွဲ ကြီး ရဲ့ အုပ်စု ၆ ခု ကို မဲခွဲ အပြီး မှာတော့ အင်္ဂလန် နဲ့ ခရိုအေးရှား တို့ အတူ ထပ်ကျ ခဲ့ သလို ယူရို ၂၀၁၆ တုန်းက ဗိုလ်လုခဲ့ ကြတဲ့ ပေါ်တူဂီ နဲ့ ပြင်သစ် တို့ လည်း တစ်အုပ်စု တည်းကျ ခဲ့ပြန် ပါတယ် ( အုပ်စု ပွဲစဉ်တွေ ကို သီးသန့် ဖော်ပြ ထားပြီး ဖြစ် ပါတယ် )